Sony nkewa mkpanaka ahapụla ọtụtụ ahịa ụwa | Gam akporosis
Ọnwụ agaghị ekwe omume: Sony nkewa mkpanaka ahapụla ọtụtụ ahịa ụwa
Sony nọ na-alụ ọgụ na ahịa ama maka afọ ole na ole gara aga wee dekọọ na-efunahụ ọtụtụ ebe. N’ọnwa Eprel nke afọ gara aga, Kenichiro Yoshida weghaara dị ka onye isi nke Sony ma kpughee a afọ atọ atụmatụ n'ihi na ụlọ ọrụ na-ekwu na ụlọ ọrụ na-aga pụọ ​​n'ichepụta ngwaọrụ.
Ugbu a, na njem nke yiri ka ọ dabara na atụmatụ ahụ, Nkewa mkpanaka nke Sony wepụrụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ahịa ama ama gburugburu ụwa. E kwenyere na ihe kpatara nke a bụ ka ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ịkọ akara na ịba uru.
Mbugharị ahụ, nke doro anya na-esochi mgbe FY2019 Corporate Strategy Meeting, kwenyere na ọ bụ akụkụ nke atụmatụ dị mkpirikpi site na Machị 31, 2019 ma ezubere iji nyere ụlọ ọrụ ahụ belata ụgwọ ọrụ iji weghachite uru, ozi Akụrụngwa akụkọ.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ụlọ ọrụ Japan chọrọ iji ọkara belata ego ọ na-arụ ọrụjiri ya tụnyere 2017. N'ihi oke mbibi ahụ, naanị "ụlọ ọrụ elebara anya" ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ Japan, Taiwan na Hong Kong, na Eshia, yana Europe. United States na akụkụ ugwu nke kọntinent Eshia na-ekpuchizi nkewa.
Na mbido afọ a, n'ọnwa Machị, Sony mere atụmatụ ijikọ nkewa mkpanaka na ngalaba ndị ọzọ, gụnyere igwefoto, TV na igwe okwu, ịga n'ihu na-ezigara ọtụtụ nde uru, yana enye akanam emi ke nde ke nde. A na-akpọ nkewa ọhụrụ ahụ 'Ngwaahịa na Ngwọta Elektrọnik' ma kwesiri ịkpata mgbanwe nke teknụzụ n'etiti ngwaahịa n'ọdịnihu.
Ọnwa ole na ole gara aga, a kọọrọ ya Onye ọrụ Japanese na-ahụ maka ekwentị mkpanaka ga-ahapụ ọkara ndị ọrụ ya n'ime otu afọ. Sony Xperia, nke nwere ndị ọrụ nke ndị ọrụ 4.000, ga-agbada ka ndị ọrụ 2.000 site ugbu a rue Machị 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọnwụ agaghị ekwe omume: Sony nkewa mkpanaka ahapụla ọtụtụ ahịa ụwa
Sony weputara usoro ohuru ya maka ekwenti
Samsung na-ekwuwa ọkwa 5x optical zoom ultra-slim module